Semalt विशेषज्ञ: वेब पृष्ठ एक्स्ट्रक्टर - शीर्ष सल्लाह
सहि उपकरणहरूले एसईओको लागि तपाईंको साइट अप्टिमाइज गर्न सजिलो बनाउन सक्छ र सुविधाको साथ विशाल डाटाको स्क्र्याप गर्दछ। त्यस्तै एक उपकरण एसईओ स्पाइडर उपकरण हो। यस कार्यक्रमले साइट समीक्षा गर्न मद्दत गर्दछ र त्रुटिहरू पहिचान गर्दछ जसले तपाईंको खोज इञ्जिन रैंकिंगलाई क्षति पुर्‍यायो। यो सानो डेस्कटप अनुप्रयोग सजिलैसँग डाउनलोड र तपाईंको व्यक्तिगत कम्प्युटर, लिनक्स वा म्याक उपकरणमा स्थानीय रूपमा स्थापना गर्न सकिन्छ। यो तपाइँको साइटको लिंकहरू, चित्रहरू, CSS फाइलहरू र एसईओ उद्देश्यका लागि अन्य डेटा क्रल हुनेछ र विश्लेषण गर्दछ। यसले तपाईंको ब्लग वा वेबसाइट अडिट गर्नेछ, धेरै काम र समय बचत गर्‍यो किनभने म्यानुअल विश्लेषणले धेरै दिन लिन सक्दछ र कसैको लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
१. डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्:
SEO स्पाइडर उपकरण म्याक, लिनक्स, उबन्टु, र विन्डोजको लागि उपलब्ध छ र पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ। जे होस्, नि: शुल्क संस्करण सीमित सुविधाहरूको साथ आउँदछ, र इजाजतपत्र खरीद गर्दा तपाईंलाई अधिक URL हरू अनुक्रमणिका र विश्लेषण गर्न अनुमति दिनेछ। यो दुबै आधारभूत र उन्नत वेबसाइटहरूको लागि उपयोगी छ र गैर प्रोग्रामरहरूको लागि उत्तम छ। तपाईं यो फ्रिवेयर तुरून्त गुगल प्ले स्टोर वा अन्य समान अनलाइन स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र स्थापना गर्नुहोस्।
२. वेबसाइट क्रल वा एक्स्ट्र्याक्ट गर्नुहोस्:
एकचोटि डाउनलोड र स्थापना भएपछि, अर्को चरण भनेको क्रलिंग उद्देश्यको लागि URL लाई यसको खोज बाकसमा घुसाउनु हो। पहिले तपाईले युआरएल प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ यसको HTTP वा https कोडको साथ र स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईं थप डोमेनहरू क्रल गर्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईंले कन्फिगरेसन> स्पाइडर क्षेत्र अन्तर्गत क्रल सबै सबडोमेन विकल्प सक्रिय गर्नुपर्नेछ। तपाइँको साइट को आकार को आधार मा, क्रॉलिंग र निष्कर्षण प्रक्रिया केहि मिनेट लिन सक्दछ।
Red. पुनर्निर्देशन जाँच गर्नुहोस्:
तपाईंले सम्भावित त्रुटिका लागि सबै रिडाइरेक्टहरू जाँच गर्न सुरु गर्नुपर्नेछ र तिनीहरूलाई यथासक्दो चाँडो हटाइनेछ ताकि यो कार्यक्रम कुनै समस्या बिना काम गरिरहन्छ। मुख्य रिडिरेक्टहरू 1०१ र 2०२ हुन्। त्यस पछि तपाई the०4 र 5०5 त्रुटिहरू पनि भेट्टाउनुहुनेछ जुन तपाईले अवस्थित पृष्ठ अवलोकन गर्नुहुन्न।
SEO स्पाइडर उपकरणको साथ, तपाईं सबै URL हरू विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको आवश्यकताको आधारमा उपयोगी पाठ वा छविहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। ती सबै चीजहरू यूआरएल प्यानलमा बचत हुन्छन्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले यसको स्तम्भहरू क्रमबद्ध गरेर URL को लम्बाई जाँच गर्नुभयो, र तपाईंले सबै फिल्टरहरू ASCII वर्णहरू, अन्डरकोरहरू, अपरकेसेसहरू, नक्कल र गतिशील सामग्री वा URL हरू जाँच गर्नुपर्नेछ।
Page. पृष्ठ शीर्षक:
अर्को, यस उपकरणले तपाईंलाई पृष्ठ शीर्षकहरू जाँच गर्न मद्दत गर्दछ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको सबै पृष्ठहरूको अद्वितीय शीर्षक छ त्यसैले यो प्रोग्राम कुनै पनि मुद्दा बिना तपाईंको लागि उपयोगी जानकारी स्क्र्याप गर्न सक्दछ। तपाईंले पृष्ठको शीर्षकमा प्राथमिक कुञ्जी शब्द पनि सम्मिलित गर्नुपर्दछ ताकि विश्लेषण तुरुन्तै सुरु हुन्छ र सबै त्रुटिहरू स्वत: स्थिर हुन्छ।
X. XML साइटम्याप:
तपाईं एसएमएस स्पाइडर उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ XML साइटम्यापहरू उत्पन्न गर्न। यस प्रकारको साइटम्याप प्रासंगिक सामग्री क्रॉल गर्न गुगल, बिंग, र याहू द्वारा प्रयोग गरीन्छ। रोडम्यापले खोज ईन्जिनलाई क्रल गर्न मद्दत गर्दछ वा कुनै समस्या बिना तपाईंको साइट निकाल्न सक्छ। तपाईं सजिलैसँग यो सुविधा परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको आवश्यकताको आधारमा केहि पृष्ठहरूको आवृत्ति परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।